Iwo akanyanya hunyanzvi manomano eSafari pa iPhone ne iPad | IPhone nhau
Akanakisa Nyanzvi Matipi eSafari pane iPhone uye iPad
Miguel Hernandez | 11/04/2021 17:54 | iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kunyangwe mazana ezvinotsiva, safari ndiyo ichiri sarudzo inodiwa kune vazhinji vashandisi ve iPadOS uye iOS, uye ndeyekuti bhurawuza rekambani yeCupertino ndeyakanyanya kubatanidzwa uye iyo inopa kuita kwakanyanya kuita munzvimbo dzese.
Zvisinei, Safari inogona kuve iri nani kwazvo, kunyanya kana iwe ukadzidza kubata zvese izvi zvidobi zvatiri kuzokudzidzisa. Iva nyanzvi yeSafari nyanzvi uye ita zvakanyanya zvese kugona kwayo uye mashandiro ainotipa.
Sezvo pane dzimwe nguva zhinji, isu tafunga kuperekedza iyi inonakidza muunganidzwa wemanyepo eSafari nevhidhiyo yatinotungamira kumusoro uye izvo zvinokutendera kuti uone mhenyu mashandiro aya emano, tora mukana wekujoinha nharaunda yedu nekunyorera ku chiteshi chedu Uye chokwadika, tisiirei hombe Senge kana iwe wakazvifarira.
1 Tab ipfupi paPadOS
2 Unogona kusevha akawanda akarova mamaki
3 Dhawunirodha zvirimo usingapinde chinongedzo
4 Vhurazve matabo awakavhara nekukanganisa
5 Unganidza windows ese paPad
6 Vhura ese mabhukumaki mawebhusaiti kamwechete
7 Batanidza kufanoona
8 Mhando dzakasiyana dzezvekuvandudza matipi uye manomano
Tab ipfupi paPadOS
IPad Hapana mubvunzo kuti yedu yatinofarira yekufambisa, inotibvumidza kuona zvirinani zvirinani uye pamusoro pezvose isu tichazorodza maziso edu zvakanyanya seizvo zvatinoona zvinopihwa kwatiri muhukuru hukuru. Tinogona kutaura kuti zvese zvakanaka, uye sezvo Apple ichiziva kuti iyo iPad chishandiso chikuru, yakawedzera mukana uyu muSafari.
Kana isu tine akawanda matabhu akavhurwa muSafari yeiyo iPad, kunyanya kana isu tichishanda zvakatwasuka, Tinogona kuramba tichimanikidza pane imwe yeaya matab uye menyu yezvinyorwa ichavhura iyo ichatibvumidza zvinotevera:
Vhara ma tabo ese kunze kweiyo yakasarudzwa
Rongedza iwo matabhu zvinoenderana nemusoro wenyaya
Ronga tabo newebhusaiti
Chishandiso chakanakisa kana isu tiri kushanda nezvakawanda zvemukati uye isu tichida kuzvironga pamwe nekuzvibvisa nekukurumidza sezvazvinogona. Isu tinoziva kuti iwe unogona kuwana zvakawanda kubva pane izvi maficha.
Unogona kusevha akawanda akarova mamaki
Aya mashandiro anoenderana nezvose zviri zviviri iyo iPhone uye iyo iPad, sezvo ichave iri ruzhinji rweavo vatiri kuzokuudza pano nhasi. Takatanga nekutungamira kwemabhukumaki, isu tatoziva kuti ivo vanoita kuti hupenyu hwedu huve nyore, uye mune ino kesi hatina kukwanisa kufuratira kugona uku. Kuve nekuwedzera mamaki rimwe nerimwe pamwe hachisi chinhu chinonyanya kufadza, ndosaka takuwanira iyi nzira pfupi.
Kana iwe ukabata pasi mabhukumaki icon (bhuku riri kumusoro kuruboshwe), zvinotevera zvinowoneka pakati pedzimwe sarudzo:
Wedzera pane kuverenga runyorwa
Wedzera mabhukumaki eX tabo
Dhawunirodha zvirimo usingapinde chinongedzo
Nguva zhinji tinowana zvinongedzo izvo vanotitungamira takananga kudownload server, Izvi zvinoitika kunyanya kana zvirimo zvinofanirwa kutorwa zvikaiswa muwebhu peji rewebhu chairo, kwete patinoendeswa kumaseva ekunze.
Dzimwe nguva isu tine usimbe kuenda kune aya mawebhusaiti, chinhu chiri nyore kuita kudzvanya pane iyi link inotifadza uye kuvhura mamiriro ezvinyorwa. Pakati pesarudzo dzese dzinoonekwa, isu tichafarira iyo inoverenga: download rakabatana faira. Nenzira iyi, zvemukati zvinonakidza zvinotorwa pasi pasina chikonzero chekuvhura tabo nyowani.
Vhurazve matabo awakavhara nekukanganisa
Dzimwe nguva tinofara nekuvhara mafomu, kutaura zvazviri kune vazhinji vashandisi vane iyi inoshamisa mania, asi nhasi hatisi kuzotaura nezvavo. Dzimwe nguva, nekutadza, isu tinovhara tabo dzese uye izvo hazvitifarire, asi Apple yakabatanidza mhinduro muSafari.
Kana isu tikabata bata refu pakabhatani kuvhura nyowani tabo (+), ichavhura runyorwa rweachangobva kuvharwa tabo. Isu tinotora mukana uno kurangarira kuti nepo uri paPadad bhatani rinogara richishanda, pa iPhone isu tichafanirwa kuvhura bhatani rekuratidzwa kwematepi, iwo mabhokisi maviri ari muchikamu chepamusoro kurudyi.
Unganidza windows ese paPad
Safari yeIpad, Sezvatakambotaura, iine akateedzana mashandiro ayo ari ega akasarudzika, izvi imhaka yekuti iPadOS yakagadzirirwa sechigadzirwa chinogadzira icho chingangodaro matanho mashoma pamberi peIOS.
Ndosaka tiine mashandiro matsva muSafari yeIpad OS yatisina muIOS, uye tinotaura nezve mashandiro e sanganisa windows.
Zvinogoneka kuti iPadOS multitasking yatitungamira kuti tigadzire akawanda Safari windows, nekungodzvanya pabhokisi rakapetwa muchikamu chepamusoro kurudyi, mashandiro e sanganisa ese windows Safari mune imwe uye ramba uchishanda zvakanaka.
Vhura ese mabhukumaki mawebhusaiti kamwechete
Kana tikatyaira akawanda ebhukumaki nekuti rakawanda rebasa redu rinoitika paInternet, tingave takatogadzira webhu rema bookmark mafolda muSafari. Kana zvirizvo uye iwe uchida kutora kwawakasiya nezuro wacho, iwe unofanirwa kuziva kuti isu zvakare tine inonakidza hunyengeri kwauri.
Paunenge uri mumabhukumaka maforodha, iwe unongofanirwa kugadzira muchina wekudhinda uye tinokwanisa vhura mumatebhu matsva, kana chii chakafanana: vhura ese ma tabo ebhukumaka dhairekitori nekubata kamwe chete.
Aya ndiwo masimba anga anesu kwenguva yakareba, kunyanya kubva pakatangwa mashandiro eiyo 3D Kubata iyo isu vedu vaive nemidziyo ine chinzvimbo icho kuburikidza nehurdware vanoshaya zvakanyanya. Nekudaro, vashandisi vazhinji vaisaziva nezve iyi inonakidza mukana weSafari paIOS uye iPadOS.
Kana iwe ukadzvanya kwenguva refu pane chinongedzo, iwe unozokwanisa kuongorora izvo zvirimo pane diki skrini. saka tichazoziva zvakatimirira kune rimwe divi.
Mhando dzakasiyana dzezvekuvandudza matipi uye manomano
iCloud / Handoff: Kana iwe uchida kuwana aya mapeji atakasiya akavhura pane yedu imwe kifaa isu tinongofanirwa kuenda kumazhinji-mawindo menyu eSafari. Vachaonekwa pazasi pechidzitiro.
Safari ine system ye Dzokera kumusoro, izvo zvinotibvumira kuti tidzokere pakutanga nekungobata kamwe chete. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kungoita pfupi pfupi yekudzvanya paawa iri kumusoro bar.
Goverana mapeji ewebhu kuburikidza neAirDrop: Kugovera webhusaiti kuburikidza neAirDrop isu tinoteedzera nhanho dzakafanana sekugovana chero faira kuburikidza nebasa iri.
Chengeta Safari yakachena: Tichaenda kuIOS Zvirongwa, uye kana tangova mukati, isu tinotsvaga chaiwo marongero eSafari. Rimwe remabasa mukati meiyo Safari menyu ndere: Bvisa nhoroondo uye data remawebhusaiti.
Ndinovimba matipi edu ese akakushandira uye wakakwanisa kuwana zvakanyanya kubva kuSafari kune yako iPhone nePad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Akanakisa Nyanzvi Matipi eSafari pane iPhone uye iPad
Ini ndakafamba mwedzi yakati wandei yapfuura kubva pa iPhone X kuenda kune gumi nembiri ichichinjisa iyo data uye marongero kubva kune imwe ichienda kune imwe, asi kubvira ipapo pakange pasina nzira yekuti zvidhori zvezvidhori zvioneke.
Dzimwe nguva dzinobuda kana iwe ukavhura chimwe chezvakanakira asi kana ukavhara iyo Safari application ivo vanorasika zvakare. Chero mhinduro inogoneka? Ndatenda
Sony inoronga kuburitsa mitambo yayo yePlayStation pa iPhone ne iPad
Apple iri kuunza kutsvaga kweteki kuApp Store